Weerarka Hoteelka Mali – Kasmo Newspaper
Weerarka Hoteelka Mali
Updated - November 20, 2015 5:33 pm GMT
Weerarkii iyo afduubkii saacadaha badan socdey ee Hotelka Radisson ee dalka Mali ayaa weli socda, iyada hadda dagaal ka socdo dabaqyada sare ee hoteelka, sida ay baahisay Wakaaladda Reuters. Hase ahaatee Sarakaiisha dalka Mali ayaa sheegay in dadkii la-haystayaalka ahaa ee afduubka loo haystey, hadda laga soo daayey.
Inkastoo weli ay waqti hore tahay in xog sugan la bixiyo, haddana warar soo baxaya waxay seegayaan in geeri badani jirto, waxaana Ciidamada Nabad Ilaalinta UN ee Mali jooga sheegeen in ay tiriyeen 27 qof oo mayd ah. Kuwaas oo ku dhintay weerarka Hoteel Radisson oo Shirkada Maraykan ahi leedahay.
Arrintu waa mid degdeg isku beddelaysa, waxaana la filayaa in faahfaahin dheeraad ahi ka soo baxaan tirada dadka ku dhintay weerarka Bamako, Caasimadda Mali, ka dhacay. Waxaan kaloo iyagana war sugan laga hayn tirada kooxda weerarka ku soo qaadday Hotelka oo ahaa mid si xoog leh loo ilaaliyo. Waxaana warar kol hore soo baxay sheegayaan in ay albaabka hoteelka ka soo galeen iyagoo wata baabuur diblomat ah, ka dibna inta ka degeen, ayey weear ku qaadeen hoteelka, iyagoo ku qaylinayey ‘Allaah Akbar’, ka dibna waxay qafaasheen ilaa 170 qof, oo isugu jira dadkii deganaa iyo shaqaalihii hoteelka.
Hadda, dadkaas badankood waa laga soo daayey, qaarna iyagaaba ka soo baxsaday. Waxaana hawlgalka qayb ka ahaa ciidamo Maraykan iyo faransiis oo gacan siinayey kuwa Mali.
Dhinaca kale, Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegtay in kooxda saldhigeedu yahay Mali ee Al-Mourabitoun ee ku xiran Al-Qacida ay sheegatay mas’uuliyadda weerarka.
Jamcadii hore ayey ahayd markii weerar dhiig badani ku daatay ay kooxaha argagixisado ku qaadeen magaalada Paris, ayna ku dileen ugu yaraan 130 qof. Weerarkaas oo uu sheegtay Ururka Isku magacaaba Khilaafada Islaamka (Islamic State) ee Ciraaq iyo Suuriya ka dagaallama.